world history Archives - Page 29 of 34 - Thutazone
တကယ့်စစ်ပွဲအတွင်းက စစ်သားဝက်ဝံကြီး Voytek
မူရင်းရေးသားသူ - SwamHtet(天下第一) ၁၉၄၂ ခုနှစ်၊ အီရန်နိုင်ငံ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ၁၉၄၂ ခုနှစ် အီရန်နိုင်ငံ စစ်မြေပြင်မှာ ပိုလန်စစ်သားတွေက ဝက်ဝံပေါက်စလေး တစ်ကောင်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပိုလန် တပ်မဟာ အမှတ် (၂) မှ ...
သမိုင်း မတိုင်မီက လူသားတို့ရဲ့ သမိုင်း
မူရင်းရေးသားသူ - Andrew Soe "သမိုင်းမတိုင်မီက လူသား သမိုင်း (၁)" မေ (၂၂) ရက် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ထရားဗတ်စ်မြို့ (Traverse City) မီချီဂန် ပြည်နယ် (Michigan) အမေရိကန် ...
ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အတွင်း ဂျာမန် တို့ နည်းပညာရပ်များ နှင့် ဂျာမန်ဒုံးပျံပညာရှင် ဝါနာဗွန်ဘရောင်း
Via : Eaint Myat Chel ဟစ်တလာ နှင့် ဂျာမန် လူမျိုး တို့ရဲ့ သိပ္ပံ နည်းပညာ၊ အတတ်ပညာ များသည် ယှဉ် ပြိုင်ဖက် မဟာမိတ် များထက် အဖက်ဖက် က ...
ဟန်နီဘော် သည် ရှေးကားသေ့နိုင်ငံမှ စစ်ပညာ၌ အထူးကျွမ်း ကျင်သော ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဖြစ်သည်။ စစ်ရေးစစ်ရာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆိုင်ပြိုင်ရသောအခက် အခဲတို့ကို စစ်ပရိယာယ် ဆင်လျက် ကျော်နင်းခဲ့ပုံများမှာ အံ့ချီး ဖွယ်ရာ ဖြစ်လေသည်။ ဟန်နီဘော် အကျပ်အတည်းနှင့် ...
Written By Ko Kyaw Min Aung လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း၅၀၀၀ကျော်လောက်က မိုဟန်ဂျိုဒရိုဆိုတဲ့မြို့ကြီးတမြို့ အိန္ဒိယအနောက်ပိုင်း (ယနေ့ခေတ်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအတွင်း)အိန္ဒူမြစ်ဝှမ်းမှာ ရှိခဲ့ဘူးပါတယ်။ အီဂျစ်၊မက်ဆိုပိုတေးမီးယားယဉ်ကျေးမူတွေနဲ့ ခေတ်ပြိုင်ဖြစ်တယ်။ မိုဟန်ဂျိုဒရိုဆိုတဲ့နာမည်ကအခုခေတ်မှပေးထားတဲ့ နာမည်ဖြစ်ပြီး "မရဏဘုံသားတို့ရဲ့စံမြန်းရာ"လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ ဒီမြို့ကြီးရဲ့မူလနာမည်ရင်းကိုတော့ဘယ်သူမှမသိကြတော့ပါဘူး။ ဒီမြို့ကြီးမှာ ဘယ်လူမျိုးတွေနေသွားကြတယ်ဆိုတာလည်းအတိအကျမှန်းဆလို့မရကြဘူး။ နှစ်ပေါင်းလေးထောင်နီးပါးလောက်စွန့်ပစ်ထားတဲ့ ဒီမြို့ကြီးကို ...
Via : မိုရှေဒါယန်အစ္စရေးသူရဲကောင်း ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီး ပြီးဆုံးချိန်တွင် (Jews)ဂျူးလူမျိုးတို့၏ လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲမှာ ပို၍ ပြင်းထန်လာသည်။ မိုရှေဒါယန်သည် (Haganah)ဟာဂါးနားအဖွဲ့ကြီး၏ အလံတော်အောက်တွင် နိုင်ငံရေးစောက်ချ လုပ်ကိုင်လျက် ရှိသည်။ ဂျူးခေါင်းဆောင်ကြီး (David Ben-Gurion) ဒေးဗစ် ဘင်ဂူရီယန် ...